Bahrain: Entona Mandatsa-dranomaso, Herisetra MAnodidina Ny Hazakazaka Grand Prix F1 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2012 4:20 GMT
Vakio amin'ny teny اردو, Français, Filipino, বাংলা, Español, English
Nampiantrano ny Formula One Grand Prix i Bahrain ny 22 Aprily, saingy fihetsiketsehana goavana iray no nialoha làlana ny hetsika fanokafana ilay fifaninanana hazakazaka. Niezaka ny nisarika ny sain’ izao tontolo izao ireo mpanao hetsi-panoherana mba hijery ny momba ny zon'olombelona [PDF] ao Bahrain, sy ny fiharatsian'ny fahasalaman'ilay mafàna fo notànana am-ponja, Abdulhadi Alkhawaja, izay nanao fitokonana tsy hihinan-kanina nanomboka tamin'ny 8 Febroary 2012.
Tamin'ny 2011 dia nofoanana io Grand Prix io noho ny korontana politika nisy tao amin'ny firenena. Noraisina ny fanapahan-kevitra tsy hanafoana azy tamin'ity taona ity, na eo aza ny korontana tsy mitsahatra. Tato anatin'ny andro vitsy dia nanao ny ezaka rehetra ny governemanta mba hifehezana ny fihanaky ny hetsi-panoherana, sady koa nandà tsy hampiditra ireo mpanao gazety vahiny maro. Tanatin'ireo fifandonana dia nandefa entona mandatsa-dranomaso sy grenady mankarenin-tsofina ny polisy, ka i Salah Abbas Habib, iray tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana no hita namoy ny ainy.
Ity video manaraka ity, avy amin'ny Al Wefaq Society dia manasongadina ny diabe goavana iray nataon'ny mpanohitra tamin'ny 20 Aprily:
Henjana ny toe-draharaha, miaraka amin'ny fisian'ny polisy manerana ny firenena. Ilay mpanao gazety mpanaraka ny Formula One, Ian Parkes, dia nanoratra tamin'ny marainan'ny 22 Aprily hoe:
@ianparkesf1: Tamin'ny andro farany amin'ny lalao ‘fanisàna ny fiaran'ny polisy mitanjozotra mankany amin'ny toerana hifaninanana, ny isa ambony indrindra androany dia 86!
Ny 21 Aprily, ilay mafàna fo, Nabeel Rajab, dia nanoritsoritra ny toe-draharaha manerana ny faritra sasany any Bahrain:
@NABEELRAJAB: Mandre fiara mpamonjy voina aho avy aty an-tranoko, helikoptera, fiaran'ny polisy sy tifitra saingy milaza moa ny mpikarakara ny #F1 fa tomombana ny zavatra rehetra #Bahrain #GP London
Tamin'ny 21 Aprily, ny Dr Fatima Haji (iray amin'ireo mpitsabo nentina niatrika fitsarana noho ny nitsaboany ireo mpanao hetsi-panoherana tamin'ny taona lasa) dia nibitsika hoe :
@drFatimaHj: Ny zanako lahikely 3 taona, ny vadiko ary ny tenako dia samy sempotra tato an'efitranonay aty Bani Jamra satria nandefa entona mandatsa-dranomaso ireo mpitandro filaminana tao Duraz!! #F1 #Bahrain
Ny lahatsary manarako avy amin'i Qamar70 dia mampiseho polisy mpandrava korontana mitifitra entona mandatsa-dranomaso eny an-dalamben'i Saar tamin'ny 19 Aprily:
Justin Gengler, ao amin'ny bilaogy Religion and Politics, Finoana sy Politika ao Bahrain dia manontany tena raha toa ilay fanapahan-kevitra hanohy ny fifaninanana hazakazaka fiarakodia ka niteraka vokatra nifanohitra amin'izay nandrasana:
Anatinà lahatsoratra iray hafa i Justin Gengler no manome fantina an-tsary momba ny hazakazaka Formula One, isan'izany ity avy amin'i Carlos Latuff ity :
Emily L. Hauser, bilaogera, dia manontany raha tena hevitra tsara tokoa ho an'ny firenena ny nanohizana ilay fifaninanana hazakazaka fiarakodia:
Niresaka indrindra momba ny hanaovana tokoa ilay hazakazaka Formula One Grand Prix ao amin'ny fireneny ny Alahady, na eo aza ny fitroarana nahafatesana mpanao hetsi-panoherana, voatifitra entona mandatsa-dranomaso, nofonjaina sy nampijaliana, dia nilaza tamin'ny BBC i Crown Prince Salman bin Hamad Al Khalifa fa “vao mainka hanome hery an'ireo ‘extremistes’,” ny fanafoanana azy raha toa kosa ka ho “hery ho an'ny tsara.” ny fanohizana ny hisian'ny hazakazaka”
@mohdashoor: Rakotra setroka avy amin'ireo kodiarana ny faravodilanitr'i #Bahrain mandritra ny fanomanan'ireo tarika #F1 ny miliny ho vonona amin'ny fiaingàna. Ho andro iray hahaliana.
@javierespinosa2: Fifandonana vaovao tany amin'ireo tanàna toa an'i Malkiya, Karzakan, Sadad sy Damistan ao #Bahrain mialoha ny fanombohan'ny #F1
@easonF1: Arahaba maraina ry Bahrain sy UK ary ny hafa koa. An-dàlana ho any amin'ny toeram-pihazakazahana GP aty #bahrain hanatrika ny iray isan'ny mahaberesaka indrindra teo amin'ny tantaran'ny F1
Reporters Without Borders (RSF – Reporters Sans Frontieres) dia nanao ity lahatsary manaraka ity mikasika ilay hazakazaka :